Mountain Sniper 3D Shooter 1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Mountain Sniper 3D Shooter
Mountain Sniper 3D Shooter ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တောင်ကြီးတောင်ငယ် Sniper 3D သေနတ်သမားအစစ်အမှန်အချိန်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အဆင့်မြင့်ရူပဗေဒနှင့်အတူ non-stop action ကို-ထုပ်ပိုးစွန့်စားမှုနှင့်အတူကြွလာ။ , ကြားဖြတ်သပိတ်နှင့်အန္တရာယ်ရှိရာဇဝတ်ဂိုဏ်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ဤမော်ကွန်းမစ်ရှင်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်သင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုပစ်ခတ်မှုအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ရှ။ အကောင်းဆုံးကိုသေနတ်သမား Be နှင့်သင်၏ရန်သူတို့ကိုစစ်မြေပြင်အတွက်လွ get တွေ့မြင် !!
ထူးခြားတဲ့ 3D ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြတ်ပြီး Sniper ရိုင်ဖယ်များနှင့်ချေမှုန်းရေးသေနတ်များနှစ်ဦးစလုံးသုံးပြီးပြင်းထန်သောမီးသတ်သမားအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံ။ Locate နှင့်ဖယ်ရှားပစ်ဝှက်ထားသောပစ်မှတ်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောပျံစက်၏အကူအညီဖြင့်သင်၏ပြောင်းလဲနေသောသေနတ်ပစ်ခတ်။ ဖျက်ဆီးတပ်များ & သင့်ရဲ့လမ်းတစ်အစစ်အမှန်အချိန်သေနတ်သမားဖြစ်လာပါသည်အရာအားလုံးကိုထွက်သုတ်။
ဒီတောင်တန်း Sniper 3D သေနတ်သမားဂိမ်းအတွက်တိကျမှန်ကန်မှု, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အကွာအဝေးတိုးတက်လာဖို့အစွမ်းထက်ရိုင်ဖယ်များနှင့်စက်သေနတ်များမှ Upgrade ။
တောင်ကြီးတောင်ငယ် Sniper 3D သေနတ်သမား features:
ကနေရှေးခယျြဖို့ 25 ကျော်ချေမှုန်းရေးနှင့် Sniper သေနတ်
ရီးရဲလ် - ဘဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂရပ်ဖစ်
25 + စစ်တိုက် mode မှာအဆင့်ဆင့်
ထက်ပိုငါးခုကို 3D ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
- shoot မှလက်ျာဘက်၌ပုတ်ဖုန်းကို တက်ဘလက်နှင့် & ချုံ့ဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။
- ပစ်မှတ်သို့မဟုတ်သင်ချင်တယ်ဆိုကို item ကိုဆင်းယူမျက်နှာပြင်ကိုထိခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေသင့်ရဲ့သေနတ်ရည်ရွယ်ပါသည်။
Mountain Sniper 3D Shooter အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Mountain Sniper 3D Shooter အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Mountain Sniper 3D Shooter အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Mountain Sniper 3D Shooter အား အခ်က္ျပပါ
mipicks-store စတိုး 16.44k 165.45M
Mountain Sniper 3D Shooter ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Mountain Sniper 3D Shooter အခ်က္အလက္
Mountain Sniper 3D Shooter APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ